Heshiiska Zlatan u saxiixay Man United afar ayay dan ugu jirtaa afarna dan uguma jirto! | Baled Weyn Media Center
Heshiiska Zlatan u saxiixay Man United afar ayay dan ugu jirtaa afarna dan uguma jirto!
Aug 25, 2017 - jawaab
Zlatan Ibrahomvic wuxuu doortay inuu heshiis 12-bilood cusub u saxiixokooxda Man United taasi oo ugu dambeyntii mustaqbalkiisa cayaareed meel u riday.
Hadaba Big Zlatan go’aan uu ku gaaray inuu kooxdiisa xagaagii dhawaa iska fasaxday qandaraaska u cusbooneysiiyo afar guul iyo afra guul daro ayay sababi doontaa:
Guuleeste: Jose Mourinho
Marar badan ayuu Jose ku cel celiyay in Big Zlatan United lasoo joogi doono hadana wuxuu ka guul gaaray sidii uu Sweden garoonka Old Trafford ugu celin lahaa, waana hubaal in Zlatan United siweyn u caawin doono marka uu garoomada dib ugu soo laabto.
Guul dareeste: Pep Guardiola
Guardiola iyo kooxdiisa Man City naadiga loolanka EPL halista weyn kala kulmi karaan waa Man United sidaa darteed in Jose uu ceshtay Zlatan, waxay guul daro ku tahay Guardiola madaama xidigaan United awoodeeda loolanka EPL sare usii qaadi doono xiliga loo baahan yahay qaybaha dambe horyaalka.
Guuleeste: Romelu Lukaku
Labo arin ayuu Lukaku ku guuleestay, midi waxay tahay culeeska ahaa in kaligiis uu yahay weeraryahanka Old Trafford ku sugan wuu ka dagaa waxaana culeeskaan la qeebsan doono Zlatan.
Mida labaad Lukaku wuxu ka faa’iidi doonaa joogitaanka Zlatan inuu waaya aragnimo dheeraad ah ka helo la shaqeyntiisa madaama 24-jir yahay.
Guul dareeste: Marcus Rashford
Hadii Lukaku ay guul ugu jirto joogitaanka Zlatan waxay sidoo kale qasaaro ugu jirtaa wiilka madaxa soo qaadayao Rashford, xili cayaareedkii hore Rashford fursad badan uu ku cayaaro ma helin Zlatan awgiis hadana hadii Sweden-ka kooxda lasi joogayo doorka Rashford sida hore inuu noqdo ayaa laga cabsi qabaa.
Guuleeste: Paul Pogba
Pogba xili cayaareedkii hore is fahan heer sare ah ayuu la sameestay Zlatan hadana joogitaanka Big Zlatan xidigaan dan weyn ayaa ugu jirto madaama ay si wacan isku fahmaan marka ay garoonka ku wada jiraan.
Guul dareeste: AC Milan
Maamulka Milan waxay ka gaabiyeen soo qaashada Zlatan oo ay si bilaash ah ku heli lahaayeen sidoo kalena waaya aragnimadiisa uu qaybaha dambe xili cayaareedkan ku caawin lahaa, sidaa darteed Milan guul daro ayay u tahay in xidigaan uu doortay sii joogitaanka garoonka Old Trafford.
Guuleeste: Premier League
Madaama Zlatan uu yahay shaqsi caan ah ganacsiga kubada cagtana awood ku leh markale EPL ayaa ka faa’iideesan doonaan wajiga Zlatan dhanka suuq geynta.
Guul dareeste: The MSL
Horyaalka waqooyiga Ameerika laga cayaaro qasaaro ayay u tahay in Zlatan EPL sii joogi waxaana ka baaqdeen shirkado badan oo ay xayeysiimo la gali lahaayeen madaama xidiga Sweden uu kubada cagta ku leeyahay magac weyn dhanka suuqana uu aad ugu sareeyo sida daqli looga abuuro.